Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » Degmada Wanla-weyn Oo Dagaal ku Waag Bariisatay.
Degmada Wanla-weyn Oo Dagaal ku Waag Bariisatay.
Dagaalkaan oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxaa uu ka dhacay Xaafado ka tirsan degmada Walaweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose,waxaana uu u dhaxeeyaa maleeshiyaad kasoo jeeda hal beel oo wada dega gudaha degmadaasi Walanweyn.
Dad ku sugan degmnada Walanweyn ayaa warbaahinta waxaa ay u sheegeen in dagaalka uu yimid kadib markii maleeshiyaad hubeysan ay weerareen,bar koontorool oo maleeshiyaad kale u taalla Galbeedka degmada wanlaweyn ,waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh.
“Walaal dagaalka xoogiisa waxaa uu ka dhacay Galbeedka degmada Walaweyn,jagboonti yaallay ayaa maleeshiyeed hubeysan ay weerareen,waxana ku dhintay Haweeney laba kale waa ay ku dhaawacmeen,hadda gudaha Magalada ayay rasaasta ka socotaa waana mid goos goos ah ayuu yiri qof ku sugan Walanweyn.
Dagaalkan saakay ka bilaawday degmada Walaweyn ayaa daba socda dagaalo horay uga dhacay degmadaas oo saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka degan degmada,waxaana jirtay in dhowr bilood ka hor ay tageen Xildhibaano uu ka mid ahaay Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya,kuwaas oo xiisada joojiyay balse Maanta markale dib u bilaawday dagaalka.